सावधान महिला ! सौता जाने गल्ती नगर्नुस् |
सावधान महिला ! सौता जाने गल्ती नगर्नुस्
प्रकाशित मिति :2018-08-02 15:28:37
असार महिनाको मध्यतिर एक महिला कार्यालयमा नै आइपुगिन् । आफूलाई सौताको परिवारले खान लाउन अनि अंश नदिएको गुनासो उनको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरमा पनि उनले अंश मुद्दा हालेकी रहिछन् । तर, उनलाई सबैभन्दा समस्या अदालती प्रकृयामा प्रमाण जुटाउन परेको छ ।
सरकारी जागिरे ती पुरुषको घरमा सरसफाइको काम गर्न जाने क्रममा उनीहरूबीच सम्बन्ध भयो । उनीहरूबीचको सम्बन्ध थाहा भएपछि श्रीमानले श्रीमतीलाई घरबाट निकालिदिए ।
उनी काम गर्ने घरको पुरुषले श्रीमती स्वीकार गरे । तर ती व्यक्तिले महिलासँग सामान्य हिन्दु वैवाहिक प्रकृया पनि पुरा गरेनन् । न त कानूनी प्रकृया नै । विवाहको प्रमाण जुटाउन आवश्यक कुनै कागजात तयार गरेनछन् ।
यद्यपि, ललितपुरको गाउँमा घर बनाएर उनसँगै बस्न थाले । छरछिमेकले उनीहरूलाई पति पत्नीको रुपमा देखेका छन्, बुझेका छन् । श्रीमानको मृत्यु नहुन्जेल सोझी महिलालाई विवाहको प्रमाणबारे कुनै आवश्यकता भएन, न त श्रीमानले नै बनाईदिए ।
अहिले श्रीमानको मृत्युपछि जेठी तर्फकाले घर आफ्नो भनी दाबी गरेपछि उनी प्रमाण जुटाउने समस्यामा छिन् ।
हुन त कानूनतः बहुविवाह अपराध हो । तर भदौको १ गतेसम्म कार्यान्वयनमा रहने मूलुकी ऐन २०२० ले बहुविवाहलाई अपराध परिभाषित गरेर पनि मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैले ती महिला आफूले पनि पत्नीको हैसियतमा अधिकार पाउनुपर्ने भनी कानूनी लडाईमा छिन् । उनी जस्ता धेरै महिला छन्, जो पुरुषको, ‘जेठी’, माइली, साईली… कान्छी बनेर बसिरहेका छन् । आफ्नो र सन्तानको पहिचान तिनै पुरुषको नाममा लिइरहेका छन् ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मूलुकी ऐनले बहुविवाहलाई अपराध परिभाषित गरे पनि जति पनि श्रीमती राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।’ अर्थात् एउटा पुरुषले एक भन्दा बढी महिलालाई पत्नीको पहिचान दिन मिल्ने गरी ऐनको व्यवस्था छ ।
आजको ठ्याक्कै १४ दिनपछि अर्थात् भदौ १ गतेदेखि यो व्यवस्था खारेज हुँदैछ । अब पुरुषले एक महिलासँग कानूनी रुपमा पत्नीको सम्बन्धमा रहँदा रहँदै अर्की श्रीमती विवाह गर्न पाउँदैनन् ।
आजको ठ्याक्कै १४ दिनपछि अर्थात् भदौ १ गतेदेखि यो व्यवस्था खारेज हुँदैछ । अब पुरुषले एक महिलासँग कानूनी रुपमा पत्नीको सम्बन्धमा रहँदा रहँदै अर्की श्रीमती विवाह गर्न पाउँदैनन् । पत्नीको हैसियतमा तिनको कुनै अधिकार रहँदैन ।
झुक्याएरै विवाह गरेको भए पनि केही महिना वा दिन जेल बसेर जरिवाना तिरेर कान्छी श्रीमती कायम हुँदैन । भदौ १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले एउटी श्रीमती हुँदाहुँदै अर्की विवाह गरेमा स्वतः बदरको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको परिच्छेद ११, विवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १७५ ले वहुविवाह गर्न नहुने अवस्थाहरूको उल्लेख गरेको छ । उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु हुँदैन ।’
यदि विवाह गरेमा ? यसको जवाफ पनि सोही दफाको उपदफा (५) ले दिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिमको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।’ यसको अर्थ एउटा वैवाहिक सम्बन्धमा रहँदा रहँदै अर्को विवाह गरेमा उक्त विवाहले कानूनी रुपमा विवाहले मान्यता पाउँदैन । महिलाले विवाहितको पहिचान पनि पाउँदिनन् ।
मुलुकी अपराध संहिता निर्माणको क्रममा अपराध संहिताको विधेयक समितिमा सभापति रहेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था मात्रै होइन यो अपराध गर्नेलाई कारबाहीको पनि व्यवस्था छ ।’
दफा १७५ कै उपदफा ४ ले भनेको छ, ‘उपदफा १ वा २ बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक देखि पाँच वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
यदि विवाहित पुरुषले श्रीमतीसँग कानूनी सम्बन्धमा रहँदा रहँदै अर्को विवाह गरेको खण्डमा एकातिर महिला पुरुष दुबै अपराधी ठहरिने भए । भने, विवाह त स्वतः बदर भइहाल्छ ।
हाम्रो समाजमा महिला सँधै तल्लो वर्गको ठानिन्छिन् । पुरुष अधिकार दिने तहको । त्यसैले पनि उसको अधिनमा धेरै महिलाले आफ्नो पहिचान गुमाएका थिए ।
अब हामीले यसअघि पनि बेहोर्दै आएको नेपाली समाजको तथ्यमा जाउँ – उमेर पुगेकी युवती महिलाको कुरा त छाडौं, एउटी बालिका, किशोरी बलात्कृत भएमा बलात्कार गर्ने पुरुषको हैसियत नहेरी ‘जिम्मा’ लगाउने समाज हाम्रो छ । यस्तो समाजमा यदि पुरुषले झुक्याएर विवाह गर्यो भने पनि विवाह स्वतः बदर भएपछि महिलाको अवस्था के होला ?
अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब महिलाले कानून जानिन भनेर सुख पाउँदैनन् । आफू सम्बन्धमा रहनुअघि पुरुषको वैवाहिक अवस्थाबारे जानकार हुनै पर्छ ।’
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको भनाइ पनि अधिवक्ता श्रेष्ठसँग मेल खान्छ । ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ उनी थप्छन्, ‘आफ्नो न्यायको खातिर पनि अब महिला सचेत बन्नैपर्छ ।’
हाम्रो समाजमा महिला सँधै तल्लो वर्गको ठानिन्छिन् । पुरुष अधिकार दिने तहको । त्यसैले पनि उसको अधिनमा धेरै महिलाले आफ्नो पहिचान गुमाएका थिए । कानूनले एकभन्दा बढि महिलालाई पहिचान दिने स्वीकृति पुरुषलाई दिएको थियो । अब त्यो अवस्था रहँदैन ।
तर, यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन होला त ? कानूनका जानकारहरूको अनुमान, यो व्यवस्थाले ५० देखि ५५ प्रतिशत बहुविवाह रोकिन्छ । यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन ल्याई महिलालाई थप हिंसामा पर्नबाट जोगाउन के गर्ने त ?
अधिवक्ता शशी अधिकारी भन्छिन्, ‘महिला पुरुष दुवैलाई सचेत गराउने ।’ उनका अनुसार अब सरकार र यो विषयसँग काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि मुख्य भूमिका कार्यान्वयनमा आउने नयाँ कानूनबारे जनसाधारणमा जानकारी गराउने हो ।
कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी भएमा झुक्याएर वा जानकारी नभएर विवाहित पुरुषसँग सम्बन्ध भएकै कारण महिलाको थप विचल्ली हुनबाट महिला जोगिन सक्छन् ।
त्यसैले अब महिलाहरू सावधान ! वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिनुअघि भावनामा आएर निर्णय नगर्नुस् । पुरुषको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिनुस् अनि विवेकले निर्णय लिएर सम्बन्ध स्थापित गर्नुस् ।